Indlela eya Ekumaketheni Kwamanje | Martech Zone
Indlela eya Ekumaketheni Kwamanje
NgoLwesibili, Novemba 6, 2012 Douglas Karr
Ngiyakuthanda ukumaketha nayo yonke into ekumele. Ngokubona kwami, ukumaketha kukhethekile ngoba kuhlanganisa amathalenta nezici eziningi:
Ukuziphatha komuntu - ukubikezela ukuziphatha kwabantu nokuqonda izidingo nezidingo zabo okuqhuba lokho kuziphatha.
Creativity - ukuza nemibono emisha elula futhi emnandi, ekhuluma ngokwazisa kwabantu ngobuhle.
Analysis - Ukuhlaziya ama-reams wedatha ukuthola amathuba okuthuthuka nokuphendula okwandisiwe
Ubuchwepheshe - ukusebenzisa ubuchwepheshe bokukala, bokuthuthukisa nokwenza imizamo yokuthengisa.
Sesifinyelele ku-Golden Age wokumaketha lapho ubuciko nesayensi bethola khona lokho kulingana. Amandla wokulinganisa ahlangatshezwa namandla okuhlaziya okushiwo amamethrikhi. Futhi imininingwane ayigcini ngokushayela izinqumo ezingcono, kepha futhi ikhulula nabakhangisi ukuthi babe nesibindi, bavivinye, bahlole imiphetho yeziteshi ezaziwayo futhi bangene kokusha ngokuphelele. Kusuka ku-Infographic ka-Eloqua, Indlela eya Ekumaketheni Kwamanje
Safika kanjani lapha?
Tags: ukulandelana kwesikhathiumlandomarketingumlando wokumakethaukumaketha kwanamuhla
Ukuphakama kwesikrini sesibili